चुरोट कसरी छोड्ने होला भनेर सोचिरहनु छ ? अव चिन्ता नगर्नुहोस्
डिसेम्बर 25, 2018 डिसेम्बर 25, 2018 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments चुरोट, डा. राम बहादुर बोहरा
चुरोटले आफुलाई भन्दा अरूलाई असर हुन्छ भन्ने कुरा बताइ रहनु नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ । स्वास्थ्यप्रति हाम्रो सानो लापरबाहीले ठूलो समस्या सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । चुरोट एक प्रकारको धुम्रपानको साधन हो। सुर्तीमा निकोटीनको प्रयोगले गर्दा मान्छेलाई चुरोटको बानी हुन सक्छ ।
यसको बानी लागिसकेपछि बानी छुटाउनु धेरै मुश्किल हुन्छ यद्यपि मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि यसको प्रभाव नराम्रो हुन्छ र स्वाद पनि मिठो हुन्न । धुम्रपानले गर्दा अरूपनि धेरै नराम्रो कुराहरू हुन्छ जुन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छन् ।
विश्वका धेरै मुलुकहरूमा नियम लागु छ कि कुन उमेरका मानिषले धुम्रपान गर्न सक्छन र कुन ठाँउमा गर्न पाँउछन । धुम्रपानले गर्दा फोक्सोको क्यान्सर हुन सक्छ, मुटुरोग र अन्य प्रकारका रोगहरू पनि लाग्न सक्छ ।
चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थबाट उत्पन्न हुने निकोटिनले मांशपेशी र स्नायुकोष बृद्धि हुनबाट रोक्नुको साथै स्मरण शक्तिमा अशर गर्छ । यसले रक्तचाप र मुटुको चाल बढाउँछ । हर्टअट्याक, स्ट्रोक र क्यान्सरको प्रमुख कारण धुम्रपान रहेको चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
चुरोट सेवन छाड्नु आफ्नो अनि परिवार र्कै आयू बृद्धी गर्न पनि हो । आज मैले चुरोट वा सुर्तीजन्य पदार्थबाट कसरी छोडाउन सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी पस्कन लागेको छु ।
१. संकल्प जस्तो ठूलो शक्ति अरू केही छैन यदि हजुर यो लत छोड्न चाहनुहुन्छ भने संकल्प गर्नुस भोली देखि नै यो सोलो पोइजन त्यसै छोड्न सक्नु हुनेछ ।
३. कुनै निश्चित मिति तोक्ने, यो दिन देखि म चुरोट खादै खान्न भनेर अलिक दिन पछाडिको कुनै एउटा दिन तोक्ने त्यो तोकिएको दिन आउनु भन्दा अगाडि देखि नै चुरोट खान कम गर्ने ।
४. मुख खाली नराख्ने, पानी प्रशस्त पिउने, मुखमा दाल चिनी, चुइगम, जस्ता खानेकुराहरू खाने ।
निलो तुथो ( Copper Sulfate) किनेर ल्याउने र एक बोतल सफा पानीमा थोरै नुन जस्तै राख्ने र दैनिक कुल्ला गर्ने केहि दिनमा यो बानी टुट्दछ ।
← शिरोधाराका फाइदाहरू
औषधिको रुपमा शिलाजितको प्रयोग →
जुलाई 6, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
2 thoughts on “चुरोट कसरी छोड्ने ?”